Nahatratra ny taona 2009 e! | Hevitra MPANOHARIANA
Miaraha tratry ny taona 2009
Nampidirin'i mangamaso @ 12:12, 2009-01-01 [Valio]
Misaotra anao namaly ny fiarahabana!
Nampidirin'i jentilisa @ 12:23, 2009-01-01 [Valio]
Tratry ny taona daholo koa ianareo!
Ho tanteraka anie ny firarian-tsoan'i jentilisa!
Nampidirin'i Tokinao @ 15:15, 2009-01-01 [Valio]
Ra-Tokinao marina! elaela tokoa izy izany e! Firariantsoa kosa tsy maintsy atao ka
Nampidirin'i jentilisa @ 16:37, 2009-01-01 [Valio]
ie. nasehoko mihitsy ny sariko sao adinon'i Jentilisa ny tenanay 'ko :).
Tsy izany fa betsabetsaka sy mafotapotaka ny lahatsoratra momba ny pôlitika tato ato izay, ka aleoko mamaky sy mandinika fotsiny mba tsy hitenitenenam-poana :).
Misaotra mitatitra ny zava-misy sy ny fomba fijerinareo hatrany e! Mahafinaritra e :).
Nampidirin'i Tokinao @ 16:43, 2009-01-01 [Valio]
De samy ho tahin'Andriamanitra e!
Nampidirin'i news2dago @ 17:29, 2009-01-01 [Valio]
arahaba tonga soa aty amin'ny 2009 ry jentl dia mirary soa e !
Nampidirin'i ikalamako @ 18:11, 2009-01-01 [Valio]
Mirary soa ho anao koa e.
Enga anie ho taona feno fahasoavana ity 2009 ity.
Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 04:56, 2009-01-02 [Valio]
samy ho tratry ny manaraka tokoa ra-jentilisa ô
Nampidirin'i Rajiosy @ 13:16, 2009-01-02 [Valio]